11/07/2019 mayoo 0
သင့်ကလေးငယ်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုမခံရစေဖို့ ကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ ဒီနေ့ ခေတ်မှာ ကလေးငယ် တွေအတွက် လုံခြုံမှု ဆိုတာ တကယ့်ကို သတိထား ရမယ့် ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နေရာတိုင်းမှာ အခွင့်အရေးသမားတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့အခါအခွင့်ချောင်းနေတဲ့သူတွေ ရှိနေတာကြောင့်ပါပဲ။ သင့်ရဲ့ ကလေးငယ်ကို ဒီလူတွေရဲ့လက်က လွတ်အောင် ဘယ်လို Continuous reading
ကယ်လိုရီလည်း မတက် သောက်ရတာလည်း သိပ်ကောင်းတဲ့ ကော့တေး ဖျော်စပ်ပုံများ ပျော်ရွှင်စွာ ခံစား ရမယ့် အချိန် တွေကို “ငါ ဒါစား လိုက်ရင်၊ ငါ ဒါ သောက် လိုက်ရင် ကယ်လိုရီဘယ်လောက် တက်မလဲ တွက်ပြီး ရှောင်ရှားဖို့ မလိုပါဘူး။သောက်တတ် စားတတ်တဲ့ သူဆိုရင်တော့ Continuous reading
အိပ်ယာထဲကချက်ချင်းမထချင်တာဟာ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါတဲ့ တစ်ခါ တစ်လေ အိပ်ယာထဲက လုံးဝ မထနိုင်တော့လို့ အလုပ်ကို နေမကောင်းဘူးလို့ ပြောပြီး တစ်နေကုန် ဖုန်းလေးသုံးပြီး အိပ် နေတတ် သူတွေ ရှိတယ် မဟုတ်လား။ မျက်လုံးလည်း ဖွင့်မရ၊ ခြေတွေ လက်တွေလည်း လှုပ်လို့ မရနဲ့ အိပ်ယာရဲ့ နွံထဲမှာ Continuous reading
လေ ဖြတ် ဝေ ဒ နာ သည် များ အ တွက် လူ ကောင်း ပ က တိ အ တိုင်း သွား လာ လှုပ် ရှား နိုင် တဲ့ ဆိပ် ဖူး ဥ Continuous reading
ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေလား ရွတ်ဆိုသင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော်
ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေလား ရွတ်ဆိုသင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော် အထွေထွေ ဗဟုသုတ ငွေကြေး လာဘ်လာဘ တွေ ပိတ်ဆို့ နေလား ရွတ်ဆို သင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့် ဂါထာတော် ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့ နေတာလား? ငွေကြေး အတွက်စိတ်ပူနေ ရတာလား? Continuous reading
သင့်အတွက် ဝိတ်မတက်အောင် စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာပုံစံများ
သင့်အတွက် ဝိတ်မတက်အောင် စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာပုံစံများ သင် ဝိတ်မတက် လောက်ဘူး ထင်ပြီး စားသုံး နေတဲ့ အရာတွေက တကယ်တော့ ကယ်လိုရီ ပမာဏများစွာ ပါဝင်ပြီး သင့်ကို အဝလွန် စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ခံတွင်းတောင်း လာရင် စားသင့်တဲ့ ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အလား သဏ္ဍာန်အရာတွေကို ဖော်ပြပေး Continuous reading
ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတုယူရမယ့် အိုဘားမားရဲ့ မဟာဗျူဟာ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတုယူရမယ့် အိုဘားမားရဲ့ မဟာဗျူဟာ အ မေ ရိ ကန် သ မ္မ တ ဟောင်း ဘား ရက် အို ဘား မား ဟာ ကျန်း မာ ရေး အ နည်း ငယ် မကောင်း တဲ့ Continuous reading
အပျိုစင်ဘဝကို မစွန့်လွှတ်ခင်မှာ မိန်းကလေးတွေ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အရာလေးတွေ
စက်ဆွဲစရာမလိုဘဲ ဆံပင် ပျော့အောင် သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်း
တစ်ပြည်တစ်ရွာဆီ ဝေးနေတဲ့ချစ်သူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ လုပ်ဆောင်ရန်အချက်များ
သမီးငယ်လေးကို ကားထဲမှာ ပေးအိပ်မိလို့ သေဆုံးသွားရတဲ့ သင်ခန်းစာယူဖွယ် အဖြစ်အပျက်…….
ချောင်းဆိုး ချွဲကျပ်အတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ အိမ်တွင်းဆေးနည်း ( ကိုယ်တွေ့ )
သင်ကအမြဲလိုလို တစ်ခြားလူတွေရဲ့လိုသုံးဖြစ်နေရတာ ဒီ(၅)ချက်ကြောင့်ပါ…
ဉာဏ်များပြီး ကောက်ကျစ်တဲ့ မိန်းမလည် သိန်းကြွယ်တွေရဲ့ အမူအကျင့် ( ၅ ) မျိုး